Halloween Ezi ntụziaka bụ oké egwu akụkụ nke ọzọ echiche. E nwere dịkarịa ala, 3 ụkpụrụ iji kwadebe Halloween Ezi ntụziaka: okike, egwu, mara mma. Gịnị mere egwu ga-weere na mara mma? N'ihi na ndị bụ maka ụmụaka. Ịdekọ dum usoro na-eme ka Halloween Ezi ntụziaka ga-abụ otu nke kasị mma echiche ka Halloween videos. Ebe a ga-amasị m ịkọrọ top 10 Halloween Ezi ntụziaka maka ụmụaka m n'anya ọtụtụ.
1. adịgboroja Aka
2. Ududo cupcake
3. Ntụ ntụ Aka
4. Mọ Mee
5. Amoosu 'naaa
1. Saa roba uwe aka n'ime ma pụọ. Tụgharịa ya na-etinye na kemfe
2. Yet 2 iko nke utu ngwakọta n'ime obere saucepan. Wụsa gelatin n'elu na ka guzo 2 nkeji. Na-ekpo ọkụ n'elu obere okpomọkụ, edemede mgbe niile, dị nnọọ ruo mgbe gelatin dissolves. Mix azụ n'ime debeere utu ngwakọta na ji atụ ihe cup. Nke a nzọụkwụ nwere ike iri ị na 10 nkeji.
3. Yet utu ngwakọta n'ime abịazi nọdụ uwe aka. Nāchikọta n'elu nke uwe na tie na ntukwasi-obi na kichin eriri. Ifriizi ruo mgbe siri ike, ma ọ bụ ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụrụ na o kwere omume.
4. Iji na-eje ozi: Kpachapụ anya bee uwe aka n'ebe oyi kpọnwụrụ n'aka. Ebe oyi kpọnwụrụ aka, nkwụ n'akuku elu, leaning megide n'akụkụ nke a nnukwu ntụmadị nnukwu efere. Wụsa na ginger ale na sachaa cider. Ndozi na Gummy agwọ.
Ọzọ ga-adị njikere na-esonụ ụbọchị.
a roba uwe aka
1 (10 ounce) ngwugwu oyi kpọnwụrụ raspberries, thawed
2 1/2 iko kranberị ihe ọṅụṅụ
2 lita sachaa apple cider (na-abụghị mmanya)
6 gummi agwọ swiiti
1. Ke a agwakọta nnukwu efere, ude shortening ruo mgbe N'ụbọchị nke abụọ. Tinye sugar, na-anọgide na creaming ruo mgbe ọma blended.
2. Tinye nnu, vanilla, na 6 ounce ịpịa ude. Ngwakọta on ala ọsọ ruo mgbe a gwara. Tinye ọzọ 2 ounce ịpịa ude ọ dị mkpa. Iti na elu ọsọ ruo mgbe frosting bụ N'ụbọchị nke abụọ.
2 iko shortening
8 iko confectioners 'sugar
1/2 teaspoon nnu
2 teaspoons vanilla wepụ
1 cup arọ ịpịa ude
Ntụ ntụ Aka
Ikpokọta butter, sugar, egg, almond wepụ, na vanilla wepụ na a Ịgwakọta nnukwu efere. Iti ọnụ na ihe electric igwekota; nwayọọ nwayọọ ịgbakwunye ntụ ọka, mmiri ntụ ntụ, na nnu, na-eti; refrigerate minit 20 ruo 30.
Preheat oven ka 325 degrees F (165 degrees C). Ejighị ya kpọrọ teghị mmiri Ibé akwụkwọ.
Wepụ mgwakota agwa si friji na obere ichekwa. Kporo 1 n'iwetara teaspoon na oge jidesie a mpempe we akwụkwọ. Jiri we akwụkwọ tụgharịa mgwakota agwa n'ime a mkpa mkpịsị aka ekara kuki. Pịa otu almond n'ime otu njedebe nke ọ bụla kuki nye onye ahụ nke a ogologo mbo aka. Afanyekwa kuki nso n'ọnụ na ọzọ nso center nke ọ bụla na-enye echiche nke nkwonkwo mkpịsị. I nwekwara ike bee n'ime mgwakota agwa na a nkọ mma n'otu ihe na-enyere enye a ọzọ mkpịsị aka-dị ka anya. N'Usoro ekara kuki na mmiri Ibé akwụkwọ.
Ime ke preheated oven ruo mgbe kuki na ubé ọlaedo na agba, 20 na 25 nkeji.
Wepu almond si njedebe nke ọ bụla kuki; afanyekwa a obere ego nke red decorating jel n'ime oghere; dochie almond ime ka jel ka ooze si gburugburu n'ọnụ nke kuki.
1 cup butter, ịrọ arọ
1 cup confectioners 'sugar
1 teaspoon almond wepụ
2 2/3 iko niile-nzube ntụ ọka
1 teaspoon mmiri ntụ ntụ
1 (.75 ​​ounce) tube red decorating jel
3/4 cup dum almọnd
Na a nnukwu nnukwu efere, ude ọnụ butter na sugar ruo mgbe ezigbo. Iti ke àkwá na vanilla. Ebido na ntụ ọka, mmiri ntụ ntụ, na nnu. Cover, na jụọla oyi mgwakota agwa maka dịkarịa ala otu hour (ma ọ bụ n'otu ntabi anya).
Preheat oven 400 degrees F (200 degrees C). Tụgharịa mgwakota agwa on floured n'elu 1/4 ka 1/2 anụ ọhịa oké. Bee n'ime shapes na ihe ọ bụla kuki cutter. Ebe kuki 1 anụ ọhịa iche na ungreased kuki Ibé akwụkwọ.
Ime 6 ka 8 nkeji na preheated oven. Ajụkwa kpamkpam.
1 1/2 iko butter, ịrọ arọ
2 iko na-acha ọcha sugar
5 iko niile-nzube ntụ ọka
2 teaspoons mmiri ntụ ntụ
Ebe a fudge straipu kuki na ala n'akuku elu jidesie a ọrụ elu. Iteto a obere Aminadab (banyere 1/8 teaspoon) nke mmanụ aṅụ jidesie ala nke a chocolate nsusu ọnụ, ma nọrọ ná nchebe swiiti ibe etiti nke kuki, ekpuchi onu. Jiri decorating jel ka anwụrụ a obere ụta jidesie kuki ke ukot swiiti ibe. Tinyegharịa na fọdụrụ Efrata.
2 (16 ounce) nchịkọta fudge straipu kuki
1/4 cup mmanụ aṅụ, ma ọ bụ dị ka mkpa
1 (9 ounce) akpa mmiri ara ehi chocolate swiiti nsutu, unwrapped
1 (4.5 ounce) tube nwa decorating jel
> Resource> Video> Halloween Party Ideas: Top 5 Halloween Ezi ntụziaka maka Kids